Sajoo Kuusaa Barbaadi Kabala Gabatee kuusaa deetaa fi Unkaa Saxaxa keessaa
Tarmiiwwan barbaachaa kan olkaa'amu akkuma gabatee ykn galmee foormulaa banameen. Yoo barbaacha tokkoo ol kakaasaa jiraatte fi tarmii barbaachaa irra deebi'uu barbaadde, tarmii barbaachaa duraan itti fayyadamaa turte sanduuqa makaarraa filuu dandeessa.
Dirree guyyaa, kan dhangii "DD.MM.YY" kuusdeetaa keessaa (fakkeenyaaf, 17.02.65) olkaa'ame qabda. Dhangiin galfata madda deetaa ilaalii keessaa gara "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965)tti jijjiirama. Fakkeenyi armaan gadii, tarreen February 17 ofkeessatti qabatu yeroo filannoon Dirree dhangii hojjoomsi filamu qofa argama:
"5" akka yerotti "14:00:00" deebisa
Dirreewwan sa`atii kuusdeetaa dBASEf hin hiikamu akkasumas dirqama suphamuu qaba. Sa`atii "14:00:00" keessatti agarsiisuuf, 5n barbaachisaa dha.
"00:00:00" kuusawwan dirree guyyaa baratamoo mara deebisa.
Haa ta'uu malee, barbaachi Dhangii dirree fayyadami malee kuusaalee deetaa guddaa dhimoota hin dhangi'amneen walgitan, waan saffisaa ta'eef.
Turbaa abbaalota asiin gadii fayyadamuu dandeessa:
Unkaawwan arfii yabbuu-walakkaa fi yabbuu-guutuu gidduu adda baasa.
Kuusaalee deetaa haalan guddaa keessatti, kuusaa tartiiba barbaacha faallaa barbaadu keessatti yeroo fudhachuu danda'a. Dhimma kana keessatti, kaballi haalojii kuusawwan lakkaawamee jiru si beeksisa.
Barbaadi / Dhiisi